के मतपेटिका साट्न सम्भव हुन्छ ? - के मतपेटिका साट्न सम्भव हुन्छ ? -
उज्यालो प्रतिनिधि २९ बैशाख २०७९, बिहीबार समाचार
उनले बिच बाटोमा मतपेटिका साटिनसक्ने भन्दै सतर्क हुन आग्रह गरेका थिए । निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वच्छतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी उनले गरेको टिप्पणी निर्वाचन आयोगप्रति लक्षित थियो ।
कतिपय व्यक्तिहरूले मतदान सकिएर मतपेटिका निर्वाचन अधिकृतलाई बुझाउने बेलासम्म मतपेटिका साटिने र चलखेल हुनसक्ने आशंका गर्छन् । यदि आशंका अनुसार यस्तो हुन्छ भने मतदाताले व्यक्त गरेको मत रातारात साटिनु र अर्को फर्जी मतपेटिका प्रयोग हुनु विडम्बना हो ।
के त्यस्तो सम्भव हुन्छ त ? हामीले यो विषयमा निर्वाचन आयोगका आयुक्तदेखि अधिकृतसम्मलाई यो प्रश्न सोध्यौं । मतदान हुनु अघिदेखि मतगणनासम्म विभिन्न सुरक्षा र विश्वसनियताका उपाय अपनाइने भन्दै उनीहरूले यस्तो कल्पनासम्म पनि गर्न असम्भव हुने बताए ।
अर्कोतर्फ मतदान अधिकृतले मतदानस्थलमा बाहेक अन्यत्र मतपत्रमा हस्ताक्षर गर्न नपाउने भएकाले पनि उसैको हस्ताक्षरयुक्त फर्जी मत खसालेर अर्को मतपेटिका तम्तयार राख्न सम्भव हुँदैन । ‘एक त कतै साट्ने सम्भावना नै छैन’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए ।